प्रेमको १ वर्ष- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
प्रेमको १ वर्ष
प्रियंका–निक जोडीले आफ्नो प्रेमको पहिलो वर्षगाँठ मनाएको छ । निकले आफूहरूबीचको सम्बन्ध दरिलो रहेको जानकारी दिन पनि वर्षगाँठको सदुपयोग गर्दै प्रियंकालाई सोसल साइटमार्फत प्रेमपक्र लेखे । जुन यतिबेला चर्चामा छ ।
जेष्ठ १७, २०७६ हेलो शुक्रबार
अप्रिलको नयाँ अंकमा एक म्यागाजिनले आफ्नो कभर स्टोरीमा सनसनीपूर्ण खबर छाप्यो, भर्खर बिहे गरेका जोडी निक जोनास र प्रियंका चोपडाबीच वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो छैन, छिटै डिभोर्स हुँदै छ  । अमेरिकी गायक निक र बलिउड अभिनेत्री प्रियंकाको सेलिब्रेटी जोडीका बारेमा आएको अप्रत्याशित खबरले धेरैलाई आश्चर्य चकित नै पार्‍यो  ।
पछि जोडीले खबर गलत मनसायले आएको भन्दै म्यागाजिनविरुद्ध मुद्दा हाल्ने धम्की पनि दियो । पछि गाइँगुइँ सुनियो, म्यागाजिनले अप्रिल फुल मनाएको रहेछ । तर हल्ला यति चर्को फैलिएको थियो कि अप्रिल फुलका कारणले भन्ने नै ओझेलमा पर्‍यो ।
यतिबेला भने प्रियंका–निक जोडीले आफ्नो प्रेमको पहिलो वर्षगाँठ मनाएको छ । निकले आफूहरूबीचको सम्बन्ध दरिलो रहेको जानकारी दिन पनि वर्षगाँठको सदुपयोग गर्दै प्रियंकालाई सोसल साइटमार्फत प्रेमपत्र लेखे । जुन यतिबेला चर्चामा छ । हालै फ्रान्सको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा यो जोडी सँगै देखिएका थिए । त्यसो त यी दुईको प्रेमको बिजारोपण पनि यसअघिको कान्सबाटै भएको थियो । निकले इन्स्टाग्राममा कान्सकै बाल्कोनीमा बसेका आफूहरू दुईको फोटो सेयर गर्दै घतलाग्दो क्याप्सन लेखे ।
जसमा भनिएको छ, ‘एक वर्षअघि ठीक आजकै दिन, म केही साथीहरूसँग हलिउड फिल्म ब्युटी एन्ड द विस्ट हेर्न गएको थिएँ । ती साथीहरूमध्ये एक जना महिला थिइन्, जो पछि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भइन् । अनि बिस्तारै मेरो कन्फिडेन्ट बनिन्, मेरो प्रेरणा स्रोत हुँदै मेरी सुन्दर पत्नी बनिन् ।’ ३४ लाख बढीले लाइक र १२ हजार बढी कमेन्ट्स पाएको तस्बिरसहितको क्याप्सनमा अन्त्यमा लेखिएको छ, ‘दूर गन्तव्यका लागि निस्केको हाम्रो सहयात्राप्रति म धन्य छु । तिमीले हरेक दिन ममा मुस्कान ल्याइदिएकी छौं र मलाई मेरो जीवनको उत्कृष्ट भर्सन बनाउन प्रोत्साहित गर्दै आएकी छौं । आई लभ यु ।’
त्यसो त प्रतिउत्तरमा हलिउड फिल्म ‘इजन्ट इट रोमान्टिक’ स्टार प्रियंका पनि गायक निकलाई सर्वकालीन उत्कृष्ट पति भनी इंगित गर्दै लेखेकी छन्, ‘ह्याप्पी वन इयर लभ’ । मे महिनाको अन्तिमतिर पहिलोपटक भेटिएका यी दुईले डेट गरेको तीन महिना नबित्दै गत वर्षको अगस्टमा इङ्गेजमेन्ट गरेका थिए । र, डिसेम्बरमा हिन्दु र क्रिश्चियन धर्मअनुसार धुमधामले विवाह गरेका थिए । २६ वर्षीय निकभन्दा प्रियंका १० वर्षले जेठी छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ १२:२१
“भारत” कै भर
सलमान खानको नयाँ फिल्म ‘भारत’ले ‘रेस ३’ बाट गुमेको साख फिर्ता ल्याउला ? उनका फ्यानलाई मात्र होइन, पुरा बलिउडलाई छ, चिन्ता र प्रतिक्षा ।
बलिउडका तीनै खान सलमान, शाहरुख र आमिरका लागि सुखद रहेन, वर्ष २०१८  । सलमानको ‘रेस ३’ बक्सअफिसमा चुक्यो, आमिरको ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’  ।
‘जिरो’ ले शाहरुखको फ्लप शृंखलालाई पूर्णविराम लगाउन सकेन । त्यसैले त भनियो, दुई दशकमा पहिलोपटक तीन खानको साम्राज्य एकैसाथ संकटमा पर्‍यो । आमिर र शाहरुखको अब कुन फिल्म रिलिज हुन्छ, अझ टुंगो छैन । सलमानचाहिँ ‘भारत’ लिएर हाजिर भएका छन् । यो फिल्म इदको अवसरमा आउँदो बुधबार प्रदर्शन हुँदै छ । सवाल स्वाभाविक भइहाल्यो, सलमानको साख जोगिएला त ? यसबीच उनी निर्मित ‘नोटबुक’ र ‘लभयात्री’ पनि फ्लप भएका थिए ।
सलमान आफैं ‘भारत’ लाई लिएर ज्यादै उत्साही छन् । प्रमोसनमा उनको तीव्र सक्रियताले त्यही देखाउँछ । नामैबाट प्रस्ट हुन्छ, ‘भारत’ देशभक्तिको गाथा हो । सलमानका यस्ता फिल्म प्रायः हिट भइरहेका छन् । ‘टाइगर जिन्दा है’ पछिल्लो उदाहरण हो । अर्को सुखद संयोगचाहिँ, ‘टाइगर जिन्दा है’ र ‘भारत’ का निर्देशक एकै हुन्, अलि अब्बास जाफर । अब्बास र सलमानको यो तेस्रो सहकार्य हो । ‘सुल्तान’ ब्लकबस्टर भयो । ‘टाइगर जिन्दा है’ ले पनि ५ करोडभन्दा बढी कलेक्सन गरेर रेकर्ड राख्यो । दुवै फिल्मले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए । कोरियन मेलोड्रामा ‘ओड् टु माई फादर’ मा आधारित छ, ‘भारत’ । यसको कथा अब्बासले नै लेखेका हुन् । ब्रिटिस उपनिवेशपछिको घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखिएको छ । जसका लागि अब्बासले स्वतन्त्र हुँदा ८ वर्ष भएको एउटा किशोरलाई मुख्य पात्रका रूपमा उभ्याएका छन् । त्यही किशोर ७० वर्ष हुँदासम्मको यात्रा समेटिएको छ । भन्नुपरेन, यो शीर्ष भूमिका सलमान खानको हो । ट्रेलरमै सलमानलाई झन्डै आधा दर्जन भिन्न रूपमा देख्न पाइन्छ । फिल्म बहुप्रतीक्षित बन्नुको कारण यो पनि हो । सलमान आफैंले फिल्मको कथा र पात्रसँग आफू निकै नजिक रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सलमानको अपोजिटमा छिन्, कट्रिना कैफ । तर यस फिल्मका लागि कट्रिना पहिलो रोजाइ भने होइन । यो भूमिकामा प्रियंका चोपरा अनुबन्ध भइसकेकी थिइन् । अमेरिकाबाट स्वदेश फर्केर फिल्मको तयारीमा जुटिन् पनि । तर सुटिङको केही दिन एकाएक प्रियंकाले हात झिकिन् । उनले विवाहको तयारीका लागि समय चाहिएकाले भारत छोड्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् । त्यसको केही समयपछि निक जोनासकी दुलही बनिन् पनि । तर भारतलाई ‘बाईबाई’ गर्नुको खास कारण अर्कै थियो, क्रिस प्र्रेटसँग हलिउड फिल्म खेल्ने मौका जुरेपछि उनले सलमानको साथ छोडेकी थिइन् । उनको यो निर्णयले सलमान क्रुद्ध हुने भइहाले । तैपनि सुरुसुरुमा यत्ति भने, ‘इट्स ओके ।’ जब हलिउड फिल्मका लागि भारतबाट बाहिरिएको खबर कन्फर्म भयो । सलमानले आक्रोश पोखे, घुमाउरो पाराले । उनको भनाइ थियो, ‘यदि प्रियंका सलमान खानसँग काम गर्न चाहन्नन् भने ठीकै छ । उनी हलिउडको ठूलो हिरोसँग काम गर्दैछिन् नि त ।’
प्रियंकाले ‘भारत’ युनिटलाई ‘धोका’ दिएपछि बलिउडमा उनको आलोचना भएको थियो । कारण, फिल्म युनिटले विवाहलाई बाधा नपर्ने गरी सुटिङ सार्ने प्रस्ताव गर्दा पनि ‘विवाहका लागि कति समय चाहिने टुंगो नभएको’ भन्दै प्रियंका तर्किएकी थिइन् । त्यही बेला पूर्वप्रेमिका कट्रिनालाई साइन गराएका थिए सलमानले । यो जोडीबाहेक पनि फिल्ममा ज्याकी श्राफ, तबु, दिशा पटानी, सुनील ग्रोभरलगायतका कलाकारको अभिनय छ । यसको बजेट एक सय करोड भारु पुगेको छ । लोकसभामा बीजेपीको सानदार जितले फेरि प्रमाणित भएको छ, भारतमा राष्ट्रवाद खुब बिक्छ । सिनेमाको हकमा पनि यही हो । देशभक्तिपूर्ण भूमिकाबाट सलमान स्वयंले धेरैपटक वाहवाही बटुलिकेका छन् । करिअर संकटमा रहेको यो समयमा आएको बेला ‘भारत’ ले त्यस्तै सफलताको स्वाद चखाउला ?
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ १२:२०